पूरुषले प्रयोग गर्नुपर्ने यी ५ सौन्दर्यका सामाग्रीहरु ! « News24 : Premium News Channel
पूरुषले प्रयोग गर्नुपर्ने यी ५ सौन्दर्यका सामाग्रीहरु !
एजेन्सी । महिला सुन्दर बन्नका लागि विभिन्न सामग्री प्रयोग गर्छन् । उनीहरू जहाँ जाँदा पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने थुप्रै सामग्री आफ्नो मेकअप किटमा छुटाउँदैनन् । पुरुष भने सौन्दर्यलाई कमै महत्व दिन्छन् । तर, आफ्नो सौन्दर्यका लागि पुरुषले पाँच कुरामा ध्यान दिनैपर्छ ।
सेभिङपछि क्रिम –
दाह्री काटेपछि छालालाई त्यत्तिकै नछाड्नुहोस् । छालालाई मुलायम बनाइराख्न लोसन प्रयोग गर्न नभुल्नुहोला ।
नाइट क्रिम –
बडी वास –
सेभिङ क्रिम –
दाह्री काट्ने सवालमा पनि निकै ख्याल गर्नुपर्छ । कतिपयले पानीले भिजाएर मात्रै दाह्री काट्ने गर्छन् भने कतिपयले साबुन प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ । यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् ।
सेभिङ क्रिम या जेलको प्रयोग गर्नुहोला । क्रिमले दाह्री र छालालाई मुलायम बनाउँछ । दाह्री काट्दा दुख्न दिँदैन, छालामा चोट लाग्ने डर हुँदैन । सामान्य सेभरले दाह्री काट्दा समस्या हुन्छ भने इलेक्ट्रिक सेभर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।